Nnukwu oke ego n'oge nsogbu corona na-eduga ịba ụba: ọ bụ bitcoin ga-agwọta? : Martin Vrijland
Nnukwu oke ego n'oge nsogbu corona na-eduga ịba ụba: ọ bụ bitcoin ga-agwọta?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 13 Ka 2020	• 21 Comments
isi mmalite: chello.nl
"Fiat ego" ma ọ bụ "ego ntụkwasị obi" bụ ego nke na-enweta uru ya esiteghị na ihe ejiri mee ya (dịka mkpụrụ ọla edo na ọla ọcha), kama site na ntụkwasị obi na enwere ike iji ya zụta ngwongwo na ọrụ. Ya mere abughi uru ya na ntaneti ya na ihe di omimi, kama o bu ntukwasi obi na ndi na aru oru ego na etinye ego nke ego ahu.
N'ebe i nwere mkpụrụ ego ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha ogologo oge gara aga, ọnụ ahịa ahụ jikọtara otu esi ọsọ ọsọ na ole ka enwere ike belata ọla edo ma ọ bụ ọla ọcha. Site na itinye ego nke mpempe akwụkwọ, enwere ike ịgbanye igwe mbipụta akwụkwọ. N'inye 'ọnụọgụ dị na kọmputa', ọkọlọtọ dollar OPEC na njikọ maka mmepụta mmanụ ga-eweta mkpuchi. A tụbara ụkpụrụ niile ahụ n'oge nsogbu Corona.
Bankslọ akụ etiti na-ebipụta ego na-akparaghị ókè. Ha na-eme nke a maka na ịchọrọ ego na-abawanye. Kedu ụzọ ọzọ ị nwere ike, dị ka gọọmentị, ị ga - esi nye ndị enyemaka enyemaka ahụ ị webere ndị mmadụ ego iji wee lanarị?
Gịnị kpatara mkpuchi ego ji dị oke mkpa?
Mgbe ị ka nwere mkpụrụ ego ọla ọcha na ọla edo, ọnụahịa maka mkpụrụ ego ahụ mụbara ka ọnụọgụ ndị mmadụ na-abawanye na ka azụmaahịa mụbara. Nke ahụ pụtara na ị ga-enwerịrịkwu ego iji mee ahịa. M na-azụta ngwaahịa gị ma na-enyekwa gị ọtụtụ mkpụrụ ego ọla edo nke nwere ọnụ ahịa bara uru. Nwere ike ịzụta ihe ịchọrọ site na mkpụrụ ego ọla edo ahụ.
N’ihi na ị maara n’oge ahụ na ọ bụ usoro ọrụ iji wepụta ọla ọcha ma ọ bụ ọla edo n’ala, ị makwa na a ga-atụkwasịkwu mkpụrụ ego, mana na mkpa ọ dị inwekwu mkpụrụ ego apụtaghị na mkpụrụ ego ahụ ga-apụta na mberede n’ime otu izu. nwere uru ọ bara. E kwuwerị, o were oge na mgbalị iji wepụta ihe ahụ n'ala ma gbazee ya na mkpụrụ ego. I nwere ike chekwaa ego gị nwa oge were zụta ihe n’izu na-abịa, n’atụghị ụjọ na mkpụrụ ego ọla edo ruru ọkara.
Mgbe ejiri mpempe akwụkwọ dochie mkpụrụ ego ahụ dị arọ, ọ bịara dịkwuo mfe. Akwụkwọ dị mfe mbipụta. Maka nke ahụ, ụlọ akụ etiti kwesịrị ịgbanye igwe na-ebi akwụkwọ. Nke ahụ wekwara oge na mgbali, mana ọ dị mfe ugbu a. Ejikọtara mpempe akwụkwọ a na Ngwuputa ọla edo. Nke ahụ ghọrọ ọkọlọtọ ọla edo. Iji maa atụ, ibipụta ego ka jikọtara ya na ọsọ nke ndị na-egwu ọla edo nwere ike ịnweta ọla edo m, yabụ gbochie ọnụahịa nke ọnụego ngwa ngwa.
Ka mkpa ego bara ụba ka ọnụọgụ ụwa na azụmaahịa na-abawanye, a gbahapụrụ ụkpụrụ ọla edo a oge ụfọdụ. Otu a ka esi guzosie ike OPEC. Oillọ ọrụ mmanụ a metụtara njikọta ego na mmepụta mmanụ. Yabụ na e mere nkwekọrịta ụwa niile banyere ọnụ ọgụgụ gas nke mba dị iche iche ga-ekepụta. Ejikọtara dollar ahụ na mmepụta mmanụ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ibipụta dollar, ị ga - eme nke a naanị dabere na ọnụego mmanụ agbadoro.
Egotawo ọkwa ọkọlọtọ ahụ ogologo oge mana ugbu a enweghi mkpuchi ọzọ. N'oge a, ụlọ akụ etiti na-emepụta 'fiat ego'. Nke a pụtara na ha enweghị ihe mgbochi ọ bụla iji bipụta ego yana n'ihi na enweghị nkwa na nke a metụtara ọsọ nke enwere ike isi na ọla edo ma ọ bụ mmanụ weta mmachi, anaghị egbochi mbelata ego. Nwere ike inweta nnukwu ego n ’ime otu izu.
Kedu ihe ego nchekwa ọkụ a na-echeghị pụtara na omume?
Na omume, nke a pụtara na ego na-agbanwe ngwa ngwa. E bipụtara ọtụtụ narị ijeri dollar na euro n'oge nsogbu Corona. Nke ahụ pụtara na dollar na euro ndị ahụ bara ntakịrị. N'oge na-adịghị anya, nke a ga-emetụta ọnụ ahịa dị na ụlọ ahịa.
Ugbu a, ụlọ akụ etiti etoola usoro aghụghọ iji kpuchie enweghị ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na gị onwe gị dị ka ụlọ ọrụ ọtụtụ mba gbaziri ego site na nnukwu ụlọ akụ, nnukwu ụlọ akụ ahụ agbaziri ego ahụ na nnukwu ụlọ akụ. Bankslọ akụ etiti ndị ahụ na-ebipụta ego ndị ọzọ (nke ọma, ha anaghị ebipụta ya, ha na-abawanye ọnụ ọgụgụ na sistemụ kọmputa ha) iji zụta nchekwa ụgwọ (agbụ, akaebe nke ụgwọ) n'aka ọtụtụ akwụkwọ ndị ahụ.
Ya mere, were ya na ụlọ ọrụ nwere ụgwọ nde 100 nde. Ọ bụrụ na ECB zụtara ihe nchekwa ego site na ụlọ ọrụ ahụ, yabụ ụlọ ọrụ ahụ natara 100 nde n'efu. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike iji ego zụta nke ya ma ọ bụ zụta ihe ndị dara ada.
N'ụzọ dị otu a ị na - ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ na - eche na ọnọdụ akụ na ụba ọ ka dị mma. Na omume, agbanyeghị, ị butere ozugbo ihe ruru otu nde nde mmadụ. Ugbu a narị nde n'ime narị ole na ole ijeri bụ naanị obere pasent, yabụ ọ bụrụ na ị na-eme oke ugwu ụgwọ zuru oke, mmetụta mbelata yiri ka ọ ga-agbadata na usoro pasent. Central bank mere ya ka ha kwenyere na nke ha di elu, ha na –eme ugwu a, pere mpe na –aghari ime ha dika otu onu ogugu.
Nke ahụ bụ ihe anyị na-ahụ ugbu a na US ugbu a, nke ahụ bụ ihe anyị na-ahụ na Europe. Ugwu ụgwọ ji buru ibu. Agbanyeghị, ndị ọkachamara n'ihe gbasara ego n'ụwa niile kwenyere na nnukwu ịbawanye ego na-adalata.
Jiri nke ahụ tụnyere mkpụrụ ego ọlaedo ahụ. Mkpụrụ ego ọla edo ahụ ị nwetara n'izu gara aga mgbe ị rere akpa nduku kwesịrị ọnụ ahịa karịa izu a, n'ihi na enweghị ike belata ọla edo ngwa ngwa. Agbanyeghị, euro nke dị na ebe nchekwa akụ gị na-adalata ngwa ngwa n'ihi na ebipụtara nnukwu ego ngwa ngwa nke na uru ahụ ga-agbakọ ngwa ngwa.
Bitcoin dị ka ọkọlọtọ ọla edo ọhụrụ
Onye okike amaghi ihe nke bitcoin abiawo ezigbo ihe eji mara nke bu ihe di egwu banyere ọla edo nke igwu ọla.
Anyị kwesịrị inwe obi abụọ banyere ụdị mkpụrụ ego crypto a, n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịme ahịa azụmahịa ọ bụla. Obu eziokwu na Microsoft n’aho 2019 patenti 2020-060606 gbara akwụkwọ bụ ihe na-egosi na enwere ike jikọọ cryptocurrency na 'ịntanetị nke ihe'; nke anyị onwe anyị nwere ike ịbụ otu n’ime 'ihe' ahụ.
Ma anyị abanyelarị n'oge ego dijitalụ traceable. E kwuwerị, ọ bụ ego ị nwere ike inweta site na ngwa ma ọ bụ kaadị akụ gị. Site na mkpocha akwụkwọ ego na-abịanụ, anyị adịworị na ọnya traceable dijitalụ. Nsogbu ozo nke ego ahụ, n'oge a, bụ na ọ na-atule nnukwu ọsọsọ.
Satoshi Nakamoto bụ pseudonym nke onye ma ọ bụ ìgwè a na-amaghị ama, onye mere atụmatụ cryptocurrency Bitcoin ma guzobere nchekwa data mbụ blockchain. Anyị nwere ike ịnọ na-eche ma ọ bụrụ na usoro nsogbu ego ugbua abụghị nke a na-eme atụmatụ ịchụga anyị kwupụta bitcoin dịka ọkọlọtọ ọhụrụ. Na nke ahụ ị nwere ike ịnọ na-eche ma Satoshi Nakamoto esiteghị na otu otu ike mmụọ.
Agbanyeghị, sistemụ bitcoin a jiri akọ rụọ nke ọma ma dabere n'eziokwu na ntinye ọla edo. Iji zụta ego nke bitcoin, a ga-akụrị bitcoins. Nke ahụ agaghị ekwe omume na spatulas na shọvel n'ime ala, dịka nke eji ọla edo, mana nke ahụ nwere ọtụtụ kọmputa ngwa ngwa nke nwere ọnụahịa azụmaahịa dị elu ma zuo oke mmanụ ọkụ (ike). Nke a ana achi achi na obughi onye obula nwere ike iweputa bitcoins.
A na-akpọ usoro nke imepụta bitcoins 'Ngwuputa', nke bụ n'ezie ihe na-echefu ọla edo na-egwu ọla. Usoro a na-egwupụta akụ pụtara na kọmpụta ndị ahụ nwere ike idozi usoro mgbakọ na mwepụ siri ike nke na ọ nwere ike were ụbọchị tupu ịchọta azịza ahụ. Agbanyeghị, ịdị mgbagwoju anya nke usoro na-abawanye ebe enwere kọmputa ndị ọzọ na netwọkụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ebido Ngwuputa, ọ ga-esiri gị ike ịkọwa azịza ya.
Oge ọ bụla kọmputa dị otú ahụ edozila usoro, a na-emepụta bitcoin 1. Dịka i meela ekele maka ngụkọta oge a, onye na-egwu ala na-enweta akụkụ nke bitcoin ahụ dịka ụgwọ ọrụ.
Iji mee ka egwuregwu ahụ sikwuo ike, a na-egbutu ụgwọ ọrụ ahụ na ọkara afọ anọ ọ bụla. Nke ahụ agbatị mere na ndabara n'izu a. Na Mee 12 ka ọ ga-ezi. Yabụ ọ bụrụ na ị jisiri m 12 bitcoin tupu Mee 1, ị nwetara x% maka nke ahụ. Ka ọnwa nke iri na abụọ dị na Mee gachara, aghọrọ ego ahụ na ọkara. Nke a pụtara na ụfọdụ ndị na-egwu ala agaghị azụta "spatulas" na "shọvel" ọhụrụ iji rụọ ọrụ igwu ala ha. Ha enweghịzi ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik ma ọ bụ enweghị ike ịzụta kọmputa kacha ọsọ. Ha daa.
Ọ bụrụ na ịnụ ya n'ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike iche ozugbo: Nke ahụ na-eduga na monopolization. Nke ahụ pụtara na ụlọ ọrụ ndị bara ọgaranya ga-abụkwa ndị na-egwu ala ọzọ ọzọ, yabụ n'oge na-adịghị anya ị ga-enwe isi okwu ebe ihe niile na-egwu mmanụ na-ewere ọnọdụ. Akụkọ ahụ bụ na agbanyeghị ọtụtụ kọmputa na netwọkụ, usoro mgbako agbada belata. Nke a na - akpali ndị na - egwu ọhụụ maka iburu spatulas ma malite shọvel ahụ.
Agbanyeghị ma ọ bụ tụgharịgharị, ị ga-ahụkwa mmụba n'ọtụtụ ebe ebe a, enwere ihe ọghọm.
Ka o sina dị, ọtụtụ ndị na - achụ ego buru ibu nwere mmasị na ụkpụrụ nke arụ ọrụ bitcoin, kpomkwem n'ihi usoro a na - egwupụta akụ. E kwuwerị, ọ bụ ihe echetara na ịdị mgbagwoju anya nke ị na-ewepu ọla edo site na ala, yabụ ọ dị ka mkpụrụ ego ọlaedo ndị ahụ n'oge gara aga na njikọta nke 'breeki nke ọnụ ahịa'. Ọ bụ ya mere ị ji hụ na ugbu a ọtụtụ narị ijeri na azụmaahịa bitcoin.
Yabụ na Bitcoin nwere ike ibụ ọkọlọtọ ọla edo ọhụrụ. O nwere ike, dị ka a pụrụ isi nye ya, breeki ego ahụ na anyị enweghị usoro nke ugbu a.
Jikọta ego na bitcoin
N ’oku maka ochichi onye kwuo uche ya ji nke m ụnyaahụ bipụtara, Ekwuru m banyere ijikọ ego na bitcoin dị ka "ọkọlọtọ ọla edo". Can nwere ike ikwu na ego ga-enwerịrị ihe. Nwekwara ike ịlaghachi ezigbo ọla edo nkịtị ka ọ bụrụ ọkọlọtọ, mana ị ga-agbanyerịrị na-egwu ala ọlaedo n'ime ala na nke ahụ adịchaghị mma gburugburu ebe obibi. Kọmputa kọmputa agụụ nwere ike adịghị mma maka gburugburu ebe obibi, mana anyị na-ahụwanye teknụzụ ndị ọzọ na-apụta, nke nwere ike iwepụta ọkụ eletrik karịa gburugburu ebe obibi na yabụ ị nwere ike ịsị na mmasị kwesịrị ịbụ maka "ụkpụrụ" ọla edo bitcoin.
O doro anya na a ga-enwerịrị ụdị ụdị "ọla edo" ọzọ. Ma ọ bụghị ya, anyị ga-emerịrị ụgwọ mbelata ego. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe na-eme n'oge nsogbu Corona. Mbido nke ọkwa ọla edo ọhụụ ga-ejikọrịrị ya na nrụpụta ikike pyramid. Ebe ahịrị dị ugbu a, ike na-aga n’ihu na-aga n’ihu n’otu obere ihe bara ụba karị, ike kwesịrị ịbanye n’aka ndị mmadụ.
Iweghachi ndi mmadu n’agha aghagh ibu ihe mere eme. Nke ahụ emetụbeghị n'akụkọ ihe mere eme. Ma otu ugha nke bitcoin sitere, ya bu blockchain, n’enye ndi mmadu ohere inye ha ikike ime mkpebi. Ikwesighi ikwugharị usoro nke ọha mmadụ, mana ịkwesịrị ịgbanwe njikwa.
Iji maa atụ, could nwere ike nwee ministị ndị ndị ozi họpụtara na ndị na-agwa ndị mmadụ, ga-eduzi ndị ozi. Kama ị alleụ iyi ịkwado okpueze, ugbu a ha na-a swearụ iyi nye ndị mmadụ. Nke a kwesịkwara metụtara ndị ọrụ obodo na ọrụ niile na-a swearụ iyi ikwado ọchịchị n'ocheeze (ndị ikpe, ndị ọka iwu, ndị uwe ojii, ndị ọrụ nyocha, ndị na-eme iwu, wdg).
N’ezie ị nweghị ike ịkọcha ihe niile ma were ya gosi ndị mmadụ, yabụ a ga-emerịrị mmemme. Ajụjụ a bụ ma ọha mmadụ nwere ike ịkwali ụdị mgbanwe a ma ọ bụ na anyị ga-eche ọzọ ruo mgbe otu n'ime ndị na-emefu ego dịka Elon Musk na Bill Gates kwenyesiri ike, ebe anyị na-agba ọsọ ihe ize ndụ na njikọ ahụ na blockchain ga-esonyere ya na-ejikọ ụbụrụ anyị na sistemụ ahụ ma ọ bụ jikọta usoro dị otú ahụ yana akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi.
Ọ bụrụ na enwere ohere ibido mgbanwe a, ọ dị ugbu a. Anyị ekwesịghị ịtụfu ohere ahụ. Agbanyeghị, maka nke a ọ dị anyị mkpa ịkwaga onwe anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ mgbanwe, anyị nwere ike ime ihe abụọ. Ma ọ bụ anyị na-eche ruo mgbe nsogbu nke ego fiat dị ukwuu ma nwee ike ịrị elu nke ukwuu nke otu oke ike ahụ na-enye anyị "ọkọlọtọ" ọla edo ọhụrụ. Ma ọ bụ anyị ewere onwe anyị.
Ànyị na-eche ka mmụba dị oke elu na anyị ka anyị nọrọ na ngụkọta nchịkwa nchịkwa nke ike dị n'okpuru nke na enweghị ngbanwe? Mgbe ahụ anyị nwere nkwa nke ọchịchị nchịkwa teknụzụ. Nke ahụ bụ, anyị ga - ejikọ anyị n'ụzọ niile na sistemụ na-eji teknụzụ emee anyị ohu nke dijitalụ.
Ọ bụrụ na anyị kpebiri iweghara anụrị anyị, anyị nwere ike itinye igwe igwe ma nwee ike irite uru n'akụkụ mmepe nke teknụzụ a. Mgbe ahụ anyị nwere ike itinye breeki na mmepe nke AI na-akwụghị ụgwọ ma anyị nwere ike itinye brakes na centralization nke ike.
Ajụjụ a bụ, ma ohere dị ugbu a ezugo iji kpalie gị. Ajuju a bu ma ohere nke enwere oria ezughi iji kpalie otutu puku puku ndi obodo ugwu.
Ọ bụ ebe ahụ ka akparamàgwà mmadụ na-arụ, ma ọ bụ ebe ahụ ihe ịma aka na-abịa maka mgbanwe n'ezie na uche mmadụ. N'ọnọdụ ọ bụla, achọrọ m inwe ike lee onwe m anya na enyo ma mara na emeela m ike m. Ohere di ebe a, enwere ike. Anyị ga-eburu ya ma mee ya. Ọ chọghị bọọlụ na bọọlụ. Ọ na-ewe mgbanwe maka n'uche gị.
Site na ntuli aka ntanetị na ntanetị, anyị nwere ike ịwụnye ndị isi ọhụụ nke na-akọsara ndị mmadụ, na-eme ka iwu doo anya ma dị mfe, kagbuo usoro ego fiat ma jikọta ego ọhụrụ na bitcoin. Anyị nwere ike wepu ya dịka nke a na-enyochaghị ya ma ọ bụ anyị nwere ike ịbanye banye ma hapụ arịrịọ ka ọ gaa na nje. In nọ n'ime?
Mwakpo dị egwu na weebụsaịtị Martin Vrijland, mana anyị ga-aga n'ihu!
Tags: bitcoin, nsogbu corona, dollar, euro, agba, fiat, geld, usoro ego, ọkọlọtọ ọla edo, halver, halver, onu oriri, mmanụ, mbelata, OPEC, nhazi, mgbanwe, Satoshi Nakamoto, akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi
13 May 2020 na 11: 31
Chọpụta ebe a ihe kpatara njiri azụ bitcoin ji bụrụ nke siri ike:
13 May 2020 na 12: 14
Arịrịọ a bịanyere aka na ya, ọ jọgburu onwe ya na ọ bụ mmadụ ole na ole mere ihe a.
13 May 2020 na 13: 46
Ọ na - eme na omume ndị mmadụ na - enwekarị mkpesa ma nwee mmasị ịnụ ihe na-adịghị mma, mana ha achọghị itinye mgbalị iji malite mgbanwe ahụ. Kingga na ntuli aka afọ anọ ọ bụla na itinye obe bụ ihe na-atọ ụtọ, hapụ naanị ịnwe aka mee onwe gị ka ịme ihe ọ bụla - ọ bụ ezie na nke a, nke ahụ abụghị ihe karịrị ịbịanye akwụkwọ mkpesa imeghari ije.
Yabụ na ndị mmadụ ekweghị na mgbanwe ma o doro anya na ha na-ahọrọ ikwe ka ọ merie ha. Imirikiti ndị na-ekwu na ha mụ anya na-eme ihe ọ bụla na omume.
Site na 'ya na akpa nke ibe dị n’aka ’gaa DWDD, ruo‘ ya na obere igbe dị n’aka ’na-ele Jensen bụ naanị mgbanwe a na-ahụ anya 😉
13 May 2020 na 14: 17
Ọfọn, cynical ikekwe ma ọ bụ eziokwu na m. Anaghị m atụ anya ihe ọ bụla n’aka ndị ohu. Ha achọghị mgbanwe naanị ego. Ndị ohu dị mma na ndị ohu. Udo dịịrị mgbe ndị ohu ahụ ekweghị gaa n'okporo ụzọ n'ihi egwu 'corona'. Agaghị m ezumike ahụ ugbu a, mana ọ chọghị ịma banyere omume na ihe ziri ezi. Madurodam abụghị obodo nke mgbanwe na mgbanwe. Nke ahụ bụ ọdịdị nke ndị ohu na echiche nke ahịa ebe a.
Ndị ohu ahụ ka dị mma, ma ọ dịghị ihe ọzọ, uru ịbụ ohu bara karịa ọghọm ya. Ọzọkwa, echefula ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na ụra efu nke ndị ohu ahụ.
Martin, ị bụ dike, ị na-anwa ike gị niile iji dọta ịnyịnya nwụrụ anwụ ..
13 May 2020 na 15: 30
Ahụmahụm bụ na enwere mmega ahụ n’ime akpa nduku.
13 May 2020 na 15: 40
Nduku nwere agwa dị mma na ha na-akụ n'onwe ha. Ọ bụrụ n’ị tinye akpa nduku ahụ n’ala, i nwere poteto zuru oke n’ime izu ole na ole gachara. Echere m na ikwesiri imekwu ihe oma banyere akpa nduku. Horsenyịnya nwụrụ anwụ bụ akụkọ dị iche 😉
13 May 2020 na 15: 54
kpom kwem, ihe adịghị mma na…
13 May 2020 na 16: 12
Horsenyịnya nwụrụ anwụ bụ akụkọ ọzọ. Rịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na m gafee akarị.
13 May 2020 na 17: 18
Nghọta zuru oke. Daalụ maka ekele gị n'ụzọ.
Ekwesịrị m ikwuputa na m na-enwe nkụda mmụọ maka nchọpụta ahụ na enwere ngagharị dị nta na mmadụ, mana agbanyeghị na m ga-aga n'ihu n'olileanya na a ga-enwe isi.
O juru m anya na ndị mmadụ anaghị ewute ya ideju ma tinye bọtịnụ. Nke ahụ bụ naanị naanị sekọnd iri atọ nke ọrụ. Nkwenye ma obu egwu di oke? N’ime ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ ahụ otu ụbọchị? Ma ọ bụ n'ezie dị ibe na ntụrụndụ biya.
13 May 2020 na 17: 28
Ole na ole ghọtara ihe ihe dị ugbu a pụtara. Connectionshụ njikọ na nsonaazụ nke omume ụfọdụ ka chọrọ ụfọdụ EQ / IQ ma anaghị m ekwu maka ndị ohu indoctrinated nwere 'aha' tupu aha ya.
Ya mere, ichoputa helikopta bu ihe achoro, ikpochapu ndipu otutu adighi nfe. Yabụ m na-ekwu maka ụta anụ ahụ 😉
13 May 2020 na 17: 56
Echere m na ọtụtụ achọghị ịkọwa aha ha na nkọwa ha. Jọ nke onye were ha n'ọrụ, 'ọrụ', ọrụ nchekwa nchekwa AIVD wdg ọchichị na anyị bi na steeti iwu. Ahụ ụkwara. Ndị dike na sọks. E kwuwerị, ekwesịghị ịnwe ihe egwu ọ bụla maka ndị ohu. Cheedị echiche.
13 May 2020 na 18: 00
Enweela mgbe m nwere “enyi” (onye m maara) bụ onye na - enweghị ọrụ n'ụlọ ruo ọtụtụ afọ. Ọ ọkachamara. Ọpụrụiche akụkụ: njikọta na nzacha data site na ọdụ data.
O nwetaghachiri ọrụ mgbe ọ gụchara.
Nkọwa profaịlụ: nwanyị na nwa na-enweghị ụlọ maka ọrịre.
Mgbe m jụrụ ya ma ọ ka mma - yana ihe ọmụma niile o nwere banyere etu gọọmentị si ledoo ndị mmadụ - iji dozie ebe a na-eme ọfụma kama ịnwe ọrụ na-enyere aka iru ụlọ ahụ. nwanne nnukwu nwoke (nyochara nnukwu data), bụ azịza ya: “Ọ dị mma na enwere m ike ịgbanwe n'ime. Ọ fọrọ nke nta ka ụlọ m funahụ m. Ugbu a enwere m ike ibi ebe a wee nọgide na-anya ụgbọala m ".
Agbanweghi mgbanwe a sitere na ya inside
Ebee ka ndị dike ahụ nọ? Ha nọ n'ụlọ ha ma nwee ike ịga n'ihu na-anya ụgbọ ha.
13 May 2020 na 18: 23
Nke a obughi ezi ihe nlere anya nke onye n’enweghi uche-ya ma obu onye n’achoghi na o na-ewete ulo nkporo ulo nke o na-eji onwe ya kpuchie onwe ya?
13 May 2020 na 15: 41
N’ebe Germany na France onye Kampfgeist ka ka dị ndụ, Madurodam bụ n'ụzọ nkịtị ma n'ụzọ ihe atụ. Site na okwu Resistance onye na-eche ntụgharị okwu ..
13 May 2020 na 15: 44
Yiri ihe nkpuchi gị ma ọ bụrụ na ị na-apụ 😷
13 May 2020 na 15: 42
Ihe ndị ahụ ga-agbawa agbawa, ihe ọzọ ga-esochi
13 May 2020 na 17: 48
Nrapu ahụ nke na - arịa ọrịa n'ụwa nke nwere ike karịrị anyị nwere nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ị tufuo ekwentị gị ma ọ bụ kwụsị iji ihe ahụ, ha ga - ejide ikike NWO gị. Enweghị ekwentị shit-ass n'akpa uwe, ha agakwaghị enwe ike inyocha gị 24/7 na ego ọnụnụ dijitalụ ha nọ n'ihe ize ndụ ebe ha na-akpali mmadụ niile.
Kwụsị ụdị omume ahụ riri ahụ na ekwentị gị
14 May 2020 na 08: 00
Maka m, ekwentị agaghị ebipụ n’èzí
13 May 2020 na 18: 10
Akụkụ nke nkwado corona na-eyi egwu ịkwụ ụgwọ: 'Nnukwu ndudue'
Ọ dị mma na m chere na nke a abụghị nnukwu mmejọ, mana ọ dabara dabara na atụmatụ bilderberg iji bibie ndị klas etiti niile ma nyefee ya n'aka gọọmentị, yabụ ndị ọzọ mitarbeiters.
Site na 33:10 Rutte: “Ekweere m n'ọnọdụ siri ike. Mba a chọrọ steeti siri ike. ” 34:23 "Anyị bụ mba nke nwere mmekọrịta ọmịiko na isi ya."
ewepụrụ Stiglitz na mbụ ka ọ pụọ na ụlọ anụ ahụ ịkọwa ihe ole na ole, yabụ ijikọ ọchịchị ndị ọzọ. Ọchịchị socialism bụ ụzọ mbata Ọchịchị Kọmunist
13 May 2020 na 23: 57
ka esi amalite ije https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg&t=81s
14 May 2020 na 11: 56
Ọ na-aga ngwa ngwa ugbu a. Ihe nlere nke Mac ohuru. Gụnyere ihe ị ga - eme, ihe ị ga - emetụ ịtụ iji (gụọ onye ọ bụla nọ n'aka ha na akara ahụ, njehie), buru n'uche ịchị ọchị na ebe ị nọ, na otu i si akpa agwa. N'okpuru ihe nlere na anya nile na-ejikota. Gini bu kwa anya, anya na-agu AI. N'ezie n'ọdịdị ka wink.
" Oge maka nnukwu mgbanwe na nnukwu ntụgharị: bịanyere aka na arịrịọ ahụ
Should ga-anara ma ọ bụ jụ mgbochi Covid-19 ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu? Ihe a ga-eme? »
Nleta ha: 2.419.594
Gaghị enwe ike ịbanye na ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụrụ na inyeghị aha gị na nọmba ohu na tebụl na nke ahụ bụ naanị mmalite
Dọọ ọchịchị onye kwuo uche ya ụzọ mkpirisi site na mkpọchi na iweghachite akụ na ụba
2 igwefoto op Maurice de Hond achọtara ihe efu na ọkara ihe mgbochi iwu (video)
Tụlee op Mmadu ole ndi Dutch ka nwere ike ikwu ugwo ha n'oge nsogbu Corona?
Riffian op Should ga-anara ma ọ bụ jụ mgbochi Covid-19 ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu? Ihe a ga-eme?
Mmiri op Maurice de Hond achọtara ihe efu na ọkara ihe mgbochi iwu (video)
Gịnị mere i ji chọọ ịmata nke a? op Maurice de Hond achọtara ihe efu na ọkara ihe mgbochi iwu (video)